Thwebula ColorNote 3.10.6 – Vessoft
ColorNote – isicelo esheshayo lula kudalwa amanothi ezahlukene. Isofthiwe ikuvumela ukuba setha izikhumbuzi, ukulondoloza imiyalezo, ukuhlela ukuba-do nezitolo uhlu. ColorNote kwenza ukuhlunga amanothi by isigaba bese uyawumaka nabo imibala ehlukene. Isofthiwe baxhumana ikhalenda evumela ukuthi wena ukuba ulungise lwesikhathi noma ukuhlela Affaires zinyanga ezilandelayo. ColorNote isekela ukuvumelanisa amanothi phakathi Amadivayisi Android kanye kungenzeka ukuvimba amanothi by iphasiwedi noma ukuqhuba kubhekhaphu evikelwe SD-card. Futhi isofthiwe kuhlanganisa widget esakhelwe ukunamathelisa the stickers virtual on the screen main of the device.
Indalo Quick and lula ezahlukene izinhlobo amanothi
Ukuhlunga amanothi by umbala
Ukuvimba amanothi nge password
Kalula isikhumbuzi uhlelo
Amazwana on ColorNote:
ColorNote Ahlobene software:
English, Українська, Français, Deutsch... Pou 1.4.73
English, Français, Español, Deutsch... Uber 3.131.4
English, Українська, Français, Español... SpeedX 3D 1.96
Education Ithuluzi for a yokufunda okunethezekile izilimi zakwamanye amazwe nekukhuluma ukuthuthukiswa kwamakhono. Isofthiwe ikuvumela ukuba utadishe inqwaba izilimi futhi kuhlanganisa izindlela ezahlukene zokufunda.
English, Українська, Français, Español... Google Translate 5.5
English, Українська, Français, Español... Chromecast 1.14.11
Zokuham video Isofthiwe ukulawula idivayisi Chromecast. Isofthiwe kwenza ukusakaza okuqukethwe kwabezindaba noma kusuke kukhompyutha smartphone noma ithebhulethi HD-TV.
Abanye An software ezithakazelisayo ukuze ukuqopha amavidiyo funny sihambisane nanoma yimiphi amafayela alalelwayo. Isicelo has a isethi olukhulu izingcezu iculo athandwa, amabhayisikobho kanye nemifanekiso.
Office Notebook Electronic eklanyelwe ukwakha uhlu, ukufingqa, amanothi kahle mayelana noma ngekhanda.
English, Українська, Français, Español... Google Maps 9.40.2
Amamephu Isofthiwe ukubonisa ngokunembile emazweni noma ezifundeni kanye anqume ngokuzenzakalelayo imizila. Futhi isofthiwe isekela izwi GPS-navigation izimoto kanye nezinye izinhlobo zokuthutha.
abahleli Isofthiwe ngeso lengqondo imibono ehlukene futhi sihlele ekwenzeni imisebenzi ngesimo enengqondo, umuthi kanye nezinye izikimu.